Ilungelo lokushicilela kunye nokuthengisa
KwiPlum emangalisayo, LLC., ilungelo lakho lokuba neemfihlo yeyona nto iphambili ekuxhalabisayo. Senza konke esinako ukukhusela ubumfihlo babasebenzisi bethu. Iirekhodi zethu zabathengi azithengiswa okanye azithengiswa, kwaye asiyi kuchaza idatha yomthengi wethu kuye nawuphi na umntu wesithathu ngaphandle kokuba kufunwa ngumthetho. Ishishini lethu lifumana imali ngokuthengisa isoftware, kwaye alize ngokwenza imali ngedatha yakho yabucala. Umgaqo-nkqubo wethu wabucala unokushwankathelwa ngokulula kumgca omnye:
IiApps zethu kwiiVenkile zeApp
Ukuthengiswa kweeapps zethu kwiApple okanye kuGoogle kulawulwa ziziteyitimenti zabo zabucala. Asifumani naluphi na ulwazi lobuqu nokuba ziinombolo zentengiso.
Asiqokeleli nayiphi na idatha yomsebenzisi kwii-apps zevenkile ye-app
Yonke inguqulelo entsha yosetyenziso ijongwa kwakhona yi-Apple noGoogle. Zonke ii-apps zethu kwezo venkile zijongiwe kaninzi kwiminyaka emininzi.
Asiqokeleli zinkcukacha zomntu Sisebenzisa ii-Apps zethu
Asiqokeleli, sisebenzise, ​​sigcine, okanye sifikelele kuyo nayiphi na idatha yakho yobuqu kuyo nayiphi na i-apps yethu yevenkile.
• Iimvume zivumela ii-apps ukuba zifikelele kulwazi lwakho ukwenzela wena. •
• Asikwazi ukufikelela kuyo. •
Iisetingi zomntu ngamnye ezinxulumene nee-apps ayizizo ezomntu kwaye zigcinwa kuphela kwisixhobo sakho. Unokuphinda ucelwe ukuba unikeze ukufikelela kwithala leencwadi lakho, kodwa oku kuphela kukuba unokuvula iifoto zakho kwiiapps zethu zeefoto, njenge-iWatermark, kwaye uzigcine kwilayibrari yakho. Asilulungiseleli olo lwazi kwaphela kwaye asinakufikelela kulo.
I-iWatermark sisicelo se-batch watermarking iifoto. Ukwenza oko kufuna imvume yokufikelela kuzo zonke iifoto egameni lakho. Asinakho ukufikelela kuzo naziphi na iifoto okanye idatha. Akukho tshaneli yokuthumela ulwazi.
Ukongeza, ukuba uthatha ifoto usebenzisa ii-apps zethu zokufota, idatha yendawo inokugcinwa okanye isuswe kumfanekiso, kodwa asinakho ukufikelela kuloo datha kwaye ayabiwanga nabani na ngaphandle kokuba wena ngokwakho ukhetha ukwabelana ngomfanekiso.
Usetyenziso oluthengiswayo kwiPlum emangalisayo
Kwivenkile yeplum emangalisayo kwiwebhusayithi yeeodolo yyenza i-akhawunti ukugcina ukuthenga kwakho kwedijithali. Wgcina igama lakho kunye ne-imeyile kuphela . Oku kugcinwa ukubonelela ngelayisenisi emva kokuthenga nakwixesha elizayo kubasebenzisi abanokulahlekelwa (abaninzi benza) loo lwazi. Kwakhona xa ulahlekelwe iirisithi zakho, uphuculo okanye izitshixo zelayisenisi zeapps.Ulwazi lugcinwa ukuze abasebenzisi bangene nangaliphi na ixesha ukuze balufumane kwakhona.
Asinakuze sibe nedatha yekhadi lakho letyala kuba sisebenzisa iStripe kunye nePayPal (zinemigaqo-nkqubo yazo yabucala). Intengiselwano yakho iguqulelwe ngokuntsonkothileyo kwisikhangeli sakho kwaye ithunyelwe ngokuntsonkothileyo kwiiseva zabo ukuze singaze sibone iinkcukacha zekhadi letyala.
Ukuba uyivumile simane sithumela iileta zeendaba. Isinceda ukuba sikugcine usazi ngezibhengezo zemveliso zamva nje, uhlaziyo lwesoftware, unikezelo olulodwa, kunye nemisitho onokuthanda ukuva ngayo.
Ukuba awufuni ukuba sikwenze uhlale usemtsha ngeendaba ezilungileyo zePlum, uhlaziyo lwesoftware kunye nolwazi lwamva nje kwiimveliso kunye neenkonzo nqakraza kulwazi lwe-akhawunti kwaye usete ukhetho lwakho ukuze ungalufumani ulwazi. Unokubhalisela ngokulula kuyo nayiphi na i-imeyile esiyithumelayo.
Ii-Apps zethu zithobela uMthetho woKhuseleko lwaBantwana kwi-Intanethi
Usetyenziso lwethu aluqokeleli nkcukacha zobuqu nakubani na, kuquka nabantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-13.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nalo Mgaqo-nkqubo waBucala, zikhululeke ukunxibelelana nathi apha info@plumamazing.com
Le-EULA sisivumelwano sonke esiphakathi kwethu kwaye ithathe indawo yemigaqo yokuthenga kunye nolunye unxibelelwano okanye intengiso ngokubhekisele kwiSoftware. Ukuba naluphi na ubonelelo lwe-EULA lubanjelwe olungasebenziyo, intsalela ye-EULA iya kuqhubeka ngamandla nangokusebenza.
Esi siVumelwano siya kupheliswa ngokuzenzekelayo ukuba ngaba uyaphumelela ukuthobela nasiphi na isigama. Akukho saziso siya kufuneka kwiPlum emangalisayo ukwenza ukugqitywa kwayo. Nanini na ekuphelisweni kwesi siVumelwano (nokuba senziwe nguwe okanye ngePlum emangalisayo), uyakuyekisa ukusetyenziswa kwesoftware kunye nazo naziphi na iinkonzo ezinxulumene noko.
Isoftware ayinyamezeleki kwaye ayenzelwanga, yenzelwe okanye yenzelwe ukusetyenziswa okanye ukuthengiswa njengombane kulawulo lwezixhobo kwindawo enobungozi efuna ukungaphumeleli okhuselekileyo, njengokusebenza kwamancedo enyukliya, ukuhamba kwenqwelomoya okanye iinkqubo zonxibelelwano, umoya ulawulo lwendlela, oomatshini bokuxhasa ngqo ubomi, okanye izixhobo, apho ukusilela kweSoftware kunokukhokelela ngqo ekufeni, ekonzakaleni, okanye ekonakaleni ngokomzimba okanye kokusingqongileyo ("Imisebenzi eNgozi yomngcipheko"). Ngokuhambelana, i-Plum emangalisayo kunye ne-ITS SUPPLIERS NGOKUFANELEKILEYO UKUQINISEKISA OKUNYE NOKWENZA ISANGQA NGOKUFANELEKILEYO LOKUFANELEKILEYO KWIMISEBENZI YOBUGCISA KAKHULU. UNGAVUMA UKUZE I-Plum Iyasimangalisa kwaye INTSHONA ZABASEKELWINI AZISAYI KUDLALWA NGAZO ZONKE IIBHANGO OKANYE ZIIMPAHLA ZOKUQHUTYELWA KUSETYENZISWANO LOKUFAKA ISICELO. Isoftware yinto "yentengiso," njengoko eli gama lichazwa kwi-48 CFR 2.101 (Okthobha 1995), equka "isoftware yekhompyuter yokuthengisa" kunye namaxwebhu “esoftware yeekhompyuter,” njengoko amagama asetyenziswa kwi-48 CFR 12.212 (Septemba . 1995). Ihambelana ne-48 CFR 12.212 kunye ne-48 CFR 227.7202-1 ukuya nge-227.7202-4 (kaJuni 1995), bonke abaSebenzisi bakaRhulumente wase-US bafumana i-Software kuphela ngala malungelo abekiweyo apha.
Awunokwabela okanye kungenjalo ugqithise esi siVumelwano okanye nawaphi na amalungelo okanye izibophelelo ezikhoyo, ngokusebenza komthetho okanye ngenye indlela. IPlum emangalisayo inokwabela esi siVumelwano ngalo naliphi na ixesha elibhaliweyo. Esi siVumelwano siya kubopheleleka kwaye siya kongeza ukuxhamla amaqela, abaphumeleleyo kunye nabanikiweyo ababelwe. Akukho naliphi na iqela eliza kuhlala lingafakwanga okanye luxanduva lwalo naluphi na ukulibaziseka, ukusilela ekusebenzeni (ngaphandle kwesibophelelo sokuhlawula) okanye ukuphazamiseka kwenkonzo okubangelwa ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo kuwo nawuphi na unobangela ongaphaya kolawulo olufanelekileyo. Ubudlelwane phakathi kwePlum emangalisayo kwaye nguwe okwikontraktha ezimeleyo kwaye awuyi kuba negunya lokubopha iPlum emangalisayo nangayiphi na indlela.
Esi siVumelwano sakha isivumelwano esipheleleyo nesikhethekileyo phakathi kwethu, ngaphandle kwamanye amaxwebhu okanye izixhobo osinike zona. Imigaqo nemiqathango equlathwe kwesi siVumelwano ayinakuhlengahlengiswa nguwe ngaphandle kobhalo olusayinwe ngokufanelekileyo nguwe kunye nommeli ogunyazisiweyo wePlum emangalisayo. Ukuba naluphi na ulungiselelo lwesi siVumelwano sibanjiwe ukuba singanyanzeliseki ngaso nasiphi na isizathu, eso sibonelelo siya kuguqulwa kuphela ukuya kuthi ga apho kufanelekileyo ukuba sinyanzeliswe, kwaye eso sigqibo asiyi kuchaphazela ukunyanzelwa kokubonelelwa phantsi kwezinye iimeko, okanye kweminye imimiselo eseleyo. apha phantsi kwazo zonke iimeko.
Imithetho ye-United States yaseMelika kunye neLizwe laseHawaii likhusela kwaye silawula esi sivumelwano. I-Software kunye nawo onke amalungelo, isihloko kunye nepropathi enomgangatho wobukrelekrele bahlala ngePlamu emangalisayo. IPlum emangalisayo iwagcina onke amalungelo enganikwanga ngokucacileyo kwesi sivumelwano.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nale EULA okanye unqwenela ukunxibelelana nePlum emangalisayo. ngaso nasiphi na isizathu, nceda uthumele i-imeyile:
Isivumelwano seLayisensi yomsebenzisi wokugqibela ("EULA")
Le EULA sisivumelwano esisemthethweni phakathi kwakho (nokuba ngumntu okanye iqumrhu elinye) kunye nePlum Amazing ("iNkampani") yale mveliso yesoftware kwaye inokubandakanya imithombo yeendaba ehambelana nayo, idatha kunye neenkonzo, izinto eziprintiweyo, uhlaziyo, kunye nomnxeba okanye amaxwebhu e-elektroniki (ngokudibeneyo "iSoftware").
Ngokufaka, ukukopa okanye ukusebenzisa iSoftware ovumayo ukubanjwa yile EULA. Ukuba awuvumi ngokwemigaqo yale EULA, musa ukufaka, ukuvula, okanye ukusebenzisa le Software.
Isoftware ikhuselwe ilungelo lokushicilela kunye neminye imithetho yelungelo lokushicilela.
Inkampani kunye / okanye abathengisi bayo banamalungelo okuthenga itayitile, ilungelo lokushicilela kunye namanye amalungelo obunini obunokuthengiseka kwiSoftware. Isoftware inikwe ilayisensi (umntu okanye umbutho) yokusetyenziswa ngokuxhomekeke kwimigaqo nemiqathango kule EULA.
Isoftware ikhuselwe yimithetho yelungelo lokushicilela e-United States nakwamanye amazwe, nangemvumelwano yamalungelo obunini bamanye amazwe.
Isoftware inikwe ilayisensi (umntu okanye umbutho) yokusetyenziswa ngokuxhomekeke kwimigaqo nemiqathango kule EULA. Amalungelo owanikiweyo phantsi kwelayisensi awakhethwanga kwaye awususeleki. Isoftware enelayisensi ilayisenisi ayithengiswa.
(a) UVavanyo lweSoftware- Ngokuxhomekeke kwimigaqo yale EULA, unokusebenzisa iSoftware ngeenjongo zabucala kunye nezingezizo ezorhwebo ngaphandle kwentlawulo kuvavanyo. Emva kokuvavanya isoftware umsebenzisi angahlawula umrhumo wesoftware ukuze afumane iphepha-mvume lokuvula ngokupheleleyo isoftware. Ngolwazi oluthe kratya malunga namaxabiso kunye neendlela zokuthenga, nceda undwendwele iwebhusayithi yePlum emangalisayo, www.plumamazing.com.
(b) Ukwabiwa ngokutsha kweSoftware yoVavanyo. Ukuba usebenzisa iSoftware kuvavanyo unokwenza iikopi zeSoftware yokuVavanya ngendlela onqwenela ngayo; Nika nabani na iikopi zeSoftware yoVavanyo yoqobo. kunye nokusasaza iSoftware yokuVavanya kwifom yayo engatshintshiyo ngeendlela ze-elektroniki (i-Intanethi, iMedia Media (njengeFacebook okanye iTwitter), iiBBS, iilayibrari zokuhambisa zeShareware, njl.). Awunakho ukuhlawulisa nawuphi na umrhumo ngekopi okanye ngokusetyenziswa kwe-Evaluation Software uqobo, kodwa ungabiza umrhumo wokuhambisa onxulumene ngokufanelekileyo nazo naziphi na iindleko ongena kuzo usasaza uVavanyo lweSoftware (umz. Ukupakisha). Akufanele ubonakalise nangayiphi na indlela ukuba uthengisa iSoftware uqobo. Ukuhanjiswa kwesoftware yoVavanyo akuyi kukugunyazisa kuyo nayiphi na imbuyekezo evela kwiPlum Amazing. Nabani na osasaza isoftware ixhomekeke kule EULA.
2. Ilayisensi yoMsebenzisi omnye-Ilayisensi yoMsebenzisi oMnye inika umsebenzisi ukuba afake kwaye asebenzise ikhompyuter enye okanye ezininzi ezisetyenziswa ngumntu omnye ngexesha. Isoftware ibonelelwe ukuba isetyenziselwe ixesha elingenamda. Isoftware inokusetyenziswa kuphela ngokokusetyenziswa kwayo.
3. AmaPhepha-mvume oSebenziso-aMsebenzisi-aMaphepha-mvume oMsebenzisi aLawulayo anika umbutho ilungelo lokuba iSoftware ifumaneke kwinani labasebenzisi elichazwe kwesi siVumelwano. Umnini welayisenisi unokusebenzisa iSoftware ukuya kuthi ga kumda weLayisensi yoMsebenzisi oMninzi. Inani labasebenzisi akufuneki lidlule kumda weLayisensi yomsebenzisi ezininzi. Amaxabiso ezaphulelo ngevolumu. Isoftware ibonelelwe ukuba isetyenziselwe ixesha elingenamda. Isoftware inokusetyenziswa kuphela ngokokusetyenziswa kwayo. Eli phepha-mvume aliquki nawaphi na amalungelo okushicilela amaxwebhu, inkxaso yezobuchwephesha, uncedo ngomnxeba, inkonzo, okanye nasiphi na isongezo okanye uhlaziyo kwiSoftware ngaphandle kwale iNkampani okanye amaqabane ayo anokugqiba ekubeni abone ngokokubona kwabo. Ngaphandle kwephepha-mvume elichaziweyo elichazwe apha ngasentla, iNkampani okanye amaqabane ayo akanakukunika naliphi na ilungelo lalo naluphi na uhlobo, nokuba kungowomthetho, okanye akunjalo.
Awunako ukubuyisela injineli, ukuhlanganisa, okanye ukudibanisa iSoftware, ngaphandle kwendawo leyo kuphela kuvunyelwe ngokucacileyo ngumthetho osebenzayo ngaphandle komda. Awunakuqasha, uqeshise, okanye ubolekise iSoftware. Awungekhe upapashe okanye usasaze esidlangalaleni nawaphi na amanani e-serial, iikhowudi zofikelelo, iikhowudi ezingavulekanga, iipaswedi, okanye olunye ulwazi lokubhaliswa komsebenzisi-lokugqibela elinokuvumela umntu wesithathu ukuba enze i-Software ngaphandle kwemvume esemthethweni.
IPlum Amazing inokuguqula imigaqo yesi siVumelwano nangaliphi na ixesha, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwixabiso, umxholo okanye ubunjani bayo nayiphi na idatha okanye inkonzo enxulumene neSoftware. Kwimeko apho iPlum emangalisayo iguqula isiVumelwano, ungasiphelisa isiVumelwano. I-Plum Amazing inokusiyekisa esi siVumelwano nanini na emva kokukwaziswa, ukuba uza kuba nelungelo lokufumana naziphi na iinkonzo osele uzihlawule, okanye ukubuyiselwa imali ngokubona kukaPlum Amazing. IPlum Amazing inokubonelela ngesaziso nge-imeyile okanye ngokupapasha utshintsho kwiwebhusayithi yayo. Uxanduva lwakho lokuhlawula iindleko ezongezelelekileyo kunye nemirhumo ziya kusinda nakuphi na ukupheliswa kwesi siVumelwano. Uyaqonda kwaye uyavuma ukuba ukurhoxiswa komrhumo wakho lilungelo lakho elilodwa kunye nesisombululo ngokubhekisele kuyo nayiphi na imbambano nePlum Amazing. Oku kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, nayiphi na imbambano enxulumene, okanye evela: (1) naliphi na ixesha lesi siVumelwano okanye iPlum Amazing yokunyanzeliswa okanye ukusetyenziswa kwesi siVumelwano; (2) nawuphi na umgaqo-nkqubo okanye isenzo sePlum Amazing, kubandakanya nayiphi na iPolum Amazing Policy, okanye ukunyanzeliswa okanye ukusetyenziswa kwale migaqo-nkqubo; (3) Umxholo ofumaneka ngePlum Amazing okanye kwi-Intanethi okanye naluphi na utshintsho kuMxholo obonelelwe ngePlum Amazing; (4) ukukwazi kwakho ukufikelela kunye / okanye ukusebenzisa uMxholo; okanye (5) isixa okanye uhlobo lwemirhumo, iirhafu ezifanelekileyo, iindlela zokuhlawula, okanye naluphi na utshintsho kwimirhumo, iirhafu ezifanelekileyo, okanye iindlela zokuhlawula.
Unokwenza iikopi ezigciniweyo zeSoftware, ukuba ikopi yakho egciniweyo kunye neenkcukacha ezigciniweyo azifakwanga okanye zisetyenziswe ngabasebenzisi abangakhange bafumane ilayisensi yokusebenzisa iSoftware. Kukwabonelelwa ukuba zonke iikopi ezinjalo ziya kuba nelungelo lokushicilela lasekuqaleni kunye nelingaxelwanga, amalungelo obunikazi kunye nolunye uphawu lobunini bepropathi obonakala kwi-Software. Awunakho ukudlulisela amalungelo kwi-backup okanye kwikopi yokugcina.
1. Akumele usasaze nayiphi na isoftware oyiphuhlisayo ebandakanya iSoftware. 2. Ngaphandle kwekopi ezingafakwanga ezingaphezulu zeSoftware yoVavanyo ezinokuthi zisasazwe zizonke, akufuneki usasaze naziphi na iifayile ezifumaneka kule software. 3. Akumele uqeshise okanye uqeshise ngeSoftware.
Inkxaso ifumaneka kwiwebhusayithi yethu kunye ne-imeyile kubasebenzisi ababhalisiweyo.
IPlum emangalisayo, Inc. amaxesha ngamaxesha, inokuhlaziya okanye ihlaziye imveliso yeSoftware. Abasebenzisi abangasebenzisi-mvume eyodwa kunye nabasebenzisi-abaneelayisensi ezininzi banelungelo lokufumana ukuphuculwa okuncinci ukuya kukhululwa. IPlum emangalisayo, Inc. ayinasibophelelo sokubonelela ngohlaziyo okanye uhlaziyo.
Ukuziphendulela kwiiWarranty IINKONZO KUNYE NOMXHOLO ZINIKEZELWA “NJENGOKO KUNJALO” NGAPHANDLE KWESIQINISEKISO SALO LONKE UHLOBO, KUNYE NAKWIMPAKAMO EPHAKAMILEYO EVUNYELWE NGUMTHETHO OSEBENZAYO, IPLUM emangalisayo IZIBHANGELEYO NANYE KUNYE NEZO ZONKE IZIQINISEKISO ZESoftware, UKUPHAWULA, UKUPHAWULA, OLUNYE ULUNGISELELO LWE-EULA OKANYE UNXIBELELWANO NAWE, NGOKUHLONIPHA I-THERETO, NGOKUQUKA NGAPHANDLE KOMDA WONKE IZIQINISEKISO ZOKUTHENGISA, UKULUNGELELA INJONGO ETHILE, NOKUNGABONI. UMNGCIPHEKO OPHELELEYO OPHUMA EKUSETYENZISWENI OKANYE EKWENZIWENI KWEENKONZO KUNYE NOKUQULATHWE KUHLALA KUWE.
UKUSEKELWA KWIMPAHLA NGOKWENZEKILEYO INKAMPANI INGABO BUNOXanduva LWONKE IINZUZO EZILAHLEKILEYO OKANYE AMATHUBA EZOSHISHINO, UKULAHLEKA KOKUSETYENZISWA, UKUTHATYELWA KWEZOSHISHINO, UKULAHLEKA KWEEDATA, OKANYE NAYIPHI NA ENYE INDLELA EQHELEKILEYO, ENGOKWENZEKA, OKANYE INDLELA YOKUQHUBEKA YENDLELA NGOKUSETYENZISWA, TORT, ukungakhathali, Utywala PRODUCT, OKANYE OKUNYE. Lo mda uyakusebenza ngaphandle kokubhekiselelwa ukuba ingaba le nkampani iye yacetyiswa na malunga nokwenzeka kobo bungozi. UXANDUVA LWENKAMPANI PHANTSI KWALE EULA NGEKE, NGAKHO, NGAPHANDLE KWENKQUBO, NGAPHANDLE KWEMIRHUMO YEPHEPHA MVUME, UKUBA NAYIPHI NA, EHLAWULWA NGUWE KWINKAMPANI YENKQUBO YOKULUNGISELELA I-SOFTWARE EFANELELWE NGUWE PHANTSI KWALE EULA.
Esi sivumelwano siyasebenza de kube siyapheliswa. Esi sivumelwano sinokupheliswa ngaphandle kwesaziso sangaphambili kwiPlum emangalisayo, Inc. ukuba uyasilela ukuthobela nayiphi na ingxenye yesi sivumelwano. Emva kokupheliswa uya kususa nasiphi na isitshixo, khupha isoftware kwaye utshabalalise naziphi na izinto ezibhaliweyo kunye nayiphi na ikopi yesoftware, ngaphandle kokutshintsha kwenziwe kwizinto ezibhaliweyo okanye isoftware.
Bayacelwa abasebenzisi ukuba bagcine isitshixo sobhaliso ngasese. Ulwazi lokubhalisa luyimfihlo kwaye ukusetyenziswa kwakho akufuneki kuxelwe komnye umntu.
Uyavuma ukuba nawaphi na amalungelo obunini bepropathi enengqondo kwaye aya kuhlala eyiPropathi yeNkampani. Akukho nto kwesi siVumelwano iya kusebenza njengokwabelwa naliphi na ilungelo lobuGcisa beLungelo.
Idatha kunye nolwazi olunikezwe yiSoftware yenzelwe ukusetyenziswa kuphela ngemithombo yeendaba enelayisensi efanelekileyo, umxholo, kunye nezixhobo zokudala umxholo. Luxanduva lwakho ukuqiniseka ukuba akukho naliphi na ilungelo lokushicilela, ilungelo elilodwa lomenzi wechiza okanye amanye amaphepha-mvume ayimfuneko kunye nokufumana naziphi na ezo layisenisi zokunceda kunye / okanye zokwenza, zokucinezela okanye zokukhuphela ezo ndaba kunye nomxholo. Uyavuma ukurekhoda, udlale umva kwaye ukhuphele kuphela ezo zinto unelungelo elilodwa lomenzi wechiza, ilungelo lokushicilela kunye nezinye iimvume, iilayisensi kunye / okanye ukucoca. Uyavuma ukubamba iPlum Amazing ingenabungozi, ukhusele kwaye ukhusele iPlum Amazing, amagosa ayo, abalawuli kunye nabasebenzi, kuyo nayiphi na ilahleko, umonakalo, izohlwayo kunye nenkcitho (kubandakanya iifizi zamagqwetha kunye neendleko) ezivela okanye ezinxulumene nawo nawaphi na amabango onawo ( i) ibukele, ikhutshelwe, ikhutshiwe, icinezelwe, ikhutshelwe okanye idluliselwe kuyo nayiphi na into (ngaphandle kwezinto ezinikezwe yiPlum Amazing) ngokunxulumene neSoftware ngokuchasene namalungelo elinye iqela okanye ukwaphula nawuphi na umthetho, okanye (ii) wophule nayiphi na imiqathango Esi siVumelwano. Ukuba ungenisa iSoftware isuka eUnited States, uya kuyibamba kwaye uyibambe iPlum Amazing engenabungozi kuyo nayiphina imisebenzi yokungenisa nokuthumela ngaphandle okanye amanye amabango avela kolo ngeniso.
Wena noPlum Amazing niyavuma ukuba uncedo olukhethekileyo lwazo zonke iimbambano namabango anxulumene nangayiphi na indlela, okanye evela kwesi siVumelwano, okanye ukusebenzisa kwakho nasiphi na isiqulatho okanye iinkonzo ezinxulumene neSoftware, ziya kuba zezokugqibela nezibophelelayo. Ulamlo luya kwenziwa phantsi kweMithetho yoLamlo lwezoRhwebo yeAmerican Arbitration Association (“AAA”) kunye neAAA's's Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (“AAA Consumer Rules”). Ulamlo luya kwenzeka eLihue, eKauai. Ukuya kuthi ga ngokuvunyelweyo ngumthetho: akukho ulamlo phantsi kwesi siVumelwano oluya kudityaniswa nakoluphi na olunye ulamlo, kubandakanya naluphi na ulamlo olubandakanya nawuphi na umnini welayisensi yePlum Amazing; akukho zinkqubo zothethathethwano lodidi ziya kuvunyelwa; akukho kufunyanwa okanye kugxothwe inyani nakoluphi na ulamlo, ngokwasemthethweni okanye ngokufana nokuqhubeka kunganikwa isiphumo okanye isibambiso se-estoppel isiphumo nakuluphi na ulamlo olungezantsi (ngaphandle kokuba kumiselwe kwenye inkqubo phakathi kwakho kunye nePlamu Emangalisayo); kwaye akukho sigqibo somthetho nakoluphi na ulamlo olunokuthi lunikwe nasiphi na isisindo nakuphi na ulamlo olungezantsi (ngaphandle kokuba kumiselwe kwenye inkqubo phakathi kwakho noPlum Amazing). Umrhumo wakho wolamlo kunye nesabelo sakho sembuyekezo somlamli siya kuncitshiswa kwabo babekwe kwiMithetho yaBathengi yeAAA ngentsalela ehlawulwe yiPlum Amazing. Ukuba ezo ndleko zimiselwe ukugqitha, iPlum Amazing iya kuhlawula zonke iifizi zokulamla kunye nembuyekezo yomlamli. Wena kunye nePlum Amazing ninokumangalela enkundleni kuphela ukunyanzela ulamlo phantsi kwesi siVumelwano, ukuhlala kwinkqubo kulindwe ulamlo, okanye ukuqinisekisa, ukuguqula, ukuphuma okanye ukungena kwisigwebo kulwabiwo olunikezelwe ngumlamli (s). Wena kunye nePlum ngokumangalisayo uvuma kulawulo olukhethekileyo lukarhulumente kunye neenkundla zomdibaniso eziseLihue, eKauai zokunyanzelisa izibonelelo zeli candelo le-11 nokusombulula naziphi na iimbambano namabango aqondakalayo kwinkundla enxulumene nangayiphi na indlela, okanye evela, le Isivumelwano. Inkundla, hayi umlamli, uya kumisela arbitrability kwaye anyanzelise arbitration izivumelwano eziqulathwe apha, kubandakanya ukuthintelwa komdibaniso ulamlo kunye neklasi ulamlo. Esi siVumelwano nazo zonke iimbambano namabango anxulumene nangayiphi na indlela, okanye evela ngenxa yesi siVumelwano aya kulawulwa yimithetho kaRhulumente waseHawaii, ngaphandle kokubhekisa kungquzulwano lwayo lwemithetho-siseko, kunye noMthetho woLamlo lweFederal.
I-Copyright © 2018 I-Plum emangalisayo, i-LLC. Onke Amalungelo Agciniwe.
Ilungelo lokushicilela kuyo yonke into enikezelwe kule ndawo ("iSiza") ibanjwe yiPlum Amazing, LLC. okanye umyili wokuqala wezinto. Ngaphandle kokuba kuchaziwe apha, akukho nanye kwezi zinto inokukhutshelwa, iphinde ikhutshwe, isasazwe, ipapashwe ngokutsha, iguqulelwe, ikhutshelwe, iboniswe, ithunyelwe, ithunyelwe eluntwini ngocingo okanye idluliselwe ngayo nayiphi na indlela nangayiphi na indlela, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, elektroniki, oomatshini, ukufotokopa, ukurekhoda, okanye kungenjalo, ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yePlum Amazing, LLC. okanye umnini welungelo lokushicilela.
Nceda ubhale ukuba unombuzo. Kunikwe imvume yokubonisa, ukukopa, ukuhambisa kunye nokukhuphela izinto ezikulo ndawo ukuze zisetyenziselwe wena buqu, ezingezizo ezentengiso ngaphandle kokuba awuziguquleli izinto kwaye ugcina onke amalungelo obunini kunye nezinye izaziso zobunini eziqulathwe zizinto ezo.
Kananjalo ngekhe, ngaphandle kwemvume kaPlum Amazing, LLC.s, "mirror" naziphi na izinto ezikweli Sayithi nakweyiphi enye iseva. Le mvume iphela ngokuzenzekelayo ukuba wophula nayiphi na imigaqo okanye iimeko. Emva kokupheliswa, uya kutshabalalisa kwangoko naziphi na izinto ezikhutshelweyo neziprintiweyo. Nakuphi na ukusetyenziswa okungagunyaziswanga kwayo nayiphi na into equlethwe kule ndawo inokwaphula imithetho yelungelo lokushicilela, imithetho yophawu lwentengiso, imithetho yabucala kunye noluntu, kunye nemigaqo yonxibelelwano kunye nemimiselo. Onke amalungelo, isihloko kunye nomdla onganikwanga ngokucacileyo ubekelwe bucala.
Iimpawu zorhwebo, amanqaku enkonzo, kunye neelogo ("Iimpawu zorhwebo") ezisetyenzisiweyo nezibonisiweyo kule ndawo zibhalisiwe kwaye azibhaliswanga iiNtengiso zePlum Amazing, LLC. nabanye. Akukho nto kwesi siza kufuneka ithathwe njengokunika, ngokufaka, estoppel, okanye ngenye indlela, naliphi na iphepha-mvume okanye ilungelo lokusebenzisa naluphi na uphawu lwentengiso oluboniswe kwiSiza, ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yomnini wophawu lwentengiso. IPlum emangalisayo, LLC. ngokunyanzelisa ukunyanzeliswa kwamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ukuya kuthi ga kumthetho. Igama lePlum emangalisayo, LLC. okanye uphawu lwePlum Amazing alunakusetyenziswa nangayiphi na indlela, kubandakanya nentengiso okanye ukwazisa malunga nokuhanjiswa kwezixhobo kule ndawo, ngaphandle kwemvume ebhaliweyo.
IPlum emangalisayo, LLC. logo, i-iClock, iCopyPaste kunye ne-iWatermark ziimpawu zorhwebo zePlum Amazing, LLC. Zonke ezinye iimpawu zorhwebo kunye namagama orhwebo ayipropati yabanini bazo kwaye asetyenziswa apha ngeenjongo zokuzazisa kuphela.
UKUTHENGWA KWEERHAFU ZOKUSETYENZISWA
Ukusetyenziswa kwale Ndawo kuxhomekeke kwimiGaqo yokuSetyenziswa eyenza isivumelwano esisemthethweni phakathi kwakho kunye nePlum emangalisayo, LLC .. Ngokusebenzisa le Sayithi, uyavuma ukuba uyifundile, wakuqonda, kwaye uyavuma ukubotshwa ngemiThetho yokusebenzisa. Nceda ujonge imiGaqo yokusebenzisa; kwaye ukuba awuvumelani nemigaqo, musa ukuyisebenzisa le Ndawo.
Izinto ezikule ndawo zibonelelwa "njengoko zinjalo" ngaphandle kweziqinisekiso zalo naluphi na uhlobo ezibonisa okanye ezichaziweyo. Ukufikelela kangangoko kunokwenzeka ngokomthetho osebenzayo, iplum software emangalisayo, inc. Amabango onke amawaranti, abonakalisiweyo okanye abekiweyo, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, iziqinisekiso ezichaziweyo zokurhweba, ukufaneleka kwinjongo ethile, ukungaphuli umthetho okanye olunye ulwaphulo lwamalungelo. Iplum emangalisayo, inc. Ngaba awugunyazisi okanye wenze naziphi na iinkcaza malunga nokusetyenziswa, ubunyani, ukuchaneka, okanye ukuthembeka, okanye iziphumo zokusetyenziswa, okanye ezinye izinto ngokubhekisele, kwizinto ezikule ndawo okanye naziphi na iisayithi ezinxulumene nale ndawo.
Ngaphantsi kwazo naziphi na iimeko, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, ukungakhathali, kuya kuthi Plum Kuyamangalisa, inc. Banoxanduva lwalo naluphi na umonakalo othe ngqo, ngokungathanga ngqo, okhethekileyo, okwethutyana okanye okonakalisa, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, ekulahlekeni kwedatha okanye kwinzuzo, kuvela ngenxa yokusetyenziswa, okanye ukungakwazi ukusebenzisa, izixhobo ezikweli siza, nokuba iplamu iyamangalisa , inc. Okanye ummeli ogunyazisiweyo omangalisayo uye wacetyiswa malunga nokwenzeka komonakalo. Ukuba ukusebenzisa kwakho izixhobo kule ndawo kukhokelela kwimfuno yokunikwa kwenkonzo, ukulungiswa okanye ukulungiswa kwezixhobo okanye idatha, ucinga ngazo naziphi na iindleko. Amanye amaphondo awakuvumeli ukukhutshwa okanye ukunqunyulwa komonakalo okanye ukwenzeka komonakalo okanye ukubekwa ecaleni koxanduva kwiimeko ezithile, ke ngoko, lo mda ungasentla awunakho ukusebenza kuwe.
Nasiphi na isixhobo, ulwazi okanye umbono ohambisa kuwo okanye uthumele kule ndawo nangayiphi na indlela iyakuphathwa njengengangqinelani, kwaye inokusetyenziswa yiPlum Amazing, LLC. okanye amahlakani ayo nayiphi na injongo, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, ekuphuhliseni, ekuthengiseni nasekuthengiseni iimveliso. Uyakwalelwa ukuthumela okanye ukudlulisa kule ndawo nayiphi na into engekho semthethweni, eyoyikisayo, enesidima, enoburharha, ecekisayo, enobunkunkqele, iphonografi, okanye isixhobo esingcolileyo, okanye nantoni na enokubangela naluphi na uxanduva lwaseburhulumenteni okanye lolwaphulo-mthetho phantsi komthetho. .
IZIXHOBO ZOKUSETYENZISWA KOMSEBENZI
IPlum emangalisayo, ye-LLC. unokuthi nangaliphi na ixesha ahlaziye le Migaqo yoSetyenziso ngokuhlaziya le posi. Ngokusebenzisa le Ndawo, uyavuma ukubopheleleka nakuluphi na olo hlaziyo kwaye ke kufuneka ulindwendwele eli phepha ukujonga imiGaqo yokuSetyenziswa oyibopheleyo.
Ngaba loluphi uhlobo lolwazi esiziqokelelayo / inkqubo
Ngalo lonke ixesha undwendwela iwebhusayithi yethu ngaphandle kokubonelela ngeenkcukacha zakho, kuphela ulwazi oluqhelekileyo olugcinwe kwiifayile zegama le-Apache (ngokukodwa idilesi ye-IP, umhla kunye nexesha, igama kunye nenguqulo yesikhangeli sakho, ikhowudi yenqanaba, inani leendlela zokudlulisela Ulwazi malunga nephepha elindwendwelweyo Olu lwazi lugciniwe kuphela njengenyathelo lokuthathwa kokhuseleko lokunyusa ukhuseleko lwenethiwekhi kunye nolwazi ngokuchasene nokuhlaselwa kunye nokungeniswa kwaye licinywe rhoqo. Ngaphaya koko, utyelelo kwiwebhusayithi luvavanywa ngokusekwe kwezigodo, kodwa kuphela ngenxa yeenkcukacha-manani, inkqubo apho abasebenzisi abathile bahlala bengaziwa.
Ngaphandle kwalonto, sirekhoda ulwazi lobuqu kuphela xa kungeniswa ngokuzithandela lundwendwe, umzekelo, kwivenkile yethu ekwi-Intanethi, nge-imeyile, okanye xa iindwendwe zizalisa ezinye iifom. Olu lwazi luya kusetyenziswa ngokukodwa kuthi kunye namaqabane ethu (umzekelo, umboneleli wethu wentlawulo MPay24) ukulungiselela injongo ebonisiweyo.
Le webhusayithi isebenzisa iGoogle Analytics, inkonzo yohlalutyo lwewebhu enikezwe nguGoogle Inc. ("Google"). I-Google Analytics isebenzisa okubizwa ngokuba yi "cookies", iifayile ezigcinwe kwikhompyuter yakho, ezenza uhlalutyo lwendlela oyisebenzisa ngayo iwebhusayithi. Ulwazi oluveliswe yicookie malunga nokusebenzisa kwakho le webhusayithi luhlala ludluliselwa kwiseva kaGoogle eMelika kwaye igcinwe khona. Ngokwe-GDPR, indawo yethu isebenzisa ukungaziwa kwe-IP, ke idilesi yakho ye-IP incitshisiwe ngaphambi kokuba idluliselwe kuGoogle. Kuphela kukwiimeko ezizodwa apho idilesi ye-IP epheleleyo igqithiselwe kwiseva kaGoogle eMelika kunye nokuncitshiswa apho.
Egameni lomnxibelelanisi wale webhusayithi, uGoogle uza kusebenzisa olu lwazi ukuvavanya ukusetyenziswa kwewebhusayithi, ukuvelisa iingxelo malunga nemisebenzi yewebhusayithi kunye nokubonelela ngeenkonzo ngakumbi kumenzi wewebhusayithi ngokunxulumene nokusetyenziswa kwewebhusayithi kunye ne-Intanethi. Iikuki
Ngaphandle kweGoogle Analytics, Ivenkile yethu ekhompyutheni isebenzisa iicookies ezichonga inqwelo yakho yokuthenga ngexesha lokuthenga kwakho. Asigcini naluphi na ulwazi olufana negama lakho, idilesi, okanye idilesi ye-imeyile kwezi kuki. Ezi kuki zitshatyalalisiwe xa uyeka umkhangeli wakho.
Sithumela incwadana yeendaba enolwazi malunga nohlaziyo lwemveliso, unikezo olukhethekileyo, kunye neendaba zenkampani malunga nenyanga, kodwa kubathengi abasivumela ngokusemthethweni ukwenza oko. Ukuba ufuna ukubhalisa kwincwadana yethu, nceda ungene ngexesha lokuthenga kwivenkile yethu ye-intanethi okanye. Ungaphinda ubhalise kwakhona nangaliphi na ixesha. Yonke incwadana yeendaba inolwazi malunga nendlela yokubhalisela ubume kwaye ungasusa ukubhalisa ngokunxibelelana nenkonzo yethu yabathengi nge-imeyile.
Udluliso lweenkcukacha zobuqu
Ngezizathu ezingentla, sinokudlulisela idatha yakho yobuqu kubanikezeli benkonzo ukwenza imisebenzi kunye nokubonelela ngeenkonzo kuthi. Isiza siyindlela yePayPal kunye neStripe ukuze ufumane uguqulelo oluntsonkothileyo ulwazi lwentlawulo kunye nabanikezeli benkonzo yentlawulo ukuze baqhube iintlawulo, ukubuyisela umva okanye ukubuyiselwa, ngezinye iinjongo ezinxulumene nokwamkelwa kwamakhadi okuthenga ngetyala kunye nedebhithi, kunye nokuthintela, ukubhaqa, kunye nokuphanda ubuqhophololo.
Bonke aba banikezeli beenkonzo bazibophelele ngokupheleleyo kwimigangatho ye-GDPR kwaye ukulungiswa kulawulwa yimvumelwano ehambelanayo ngokweemfuno ze-GDPR kunye nolunye uxanduva oluyimfihlo kunye nokhuseleko.
Lude kangakanani ulwazi lwakho
Ukuze sifezekise ezi njongo zingasentla kwaye sikunikeze ngeyona nkonzo ibalaseleyo kubathengi (ukubuyiswa kwezitshixo zamaphepha-mvume, ukuphucula izaphulelo, inkxaso yezobuchwephesha,…) sigcina idatha yakho yobuqu okoko nje siqhubeka ukugcina nokusasaza iimveliso zethu kwaye ke ukulungela ukuxhasa abathengi bethu, ngaphandle kokuba ucela ukususwa.
I-GDPR ibonelela ngala malungelo alandelayo kubantu:
Unelungelo lokucela isiqinisekiso sokuba ulwazi okanye lwazi lomntu alwenziwanga malunga na, kwaye, apho kunjalo, ukufikelela kwiinkcukacha zobuqu.
Unelungelo lokucela ukulungiswa kweenkcukacha zakho ezichanekileyo.
Unelungelo lokucela isiphelo sedatha yakho buqu malunga nawe ngaphandle kokulibazisa okungafanelekanga.
Unelungelo lokucela isithintelo ekusebenzeni kwedatha yakho.
Unelungelo lokufumana idatha yobuqu malunga nawe, osinike yona, kwaye unelungelo lokuhambisa le datha kwenye isilawuli.
Unelungelo lokuphikisa nangaliphi na ixesha ekuqhubekiseleni idatha yobuqu malunga nawe.
Kwimeko yayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo ezinxulumene nokuqwalaselwa kwedatha yakho, nceda ukhululeke ukunxibelelana nomphathi wethu wabucala.
Isizathu sokulungiswa kwedatha
Sisebenzisa, sigcina, kwaye sisebenzisa ulwazi ...
Ukuhambisa iimveliso zethu kubathengi bethu.
Ukucwangcisa iiodolo zabathengi bethu kunye nemibuzo.
Ukwenza amanani osetyenziso kunye nokuqonda iimfuno zabathengi bethu kunye neengxaki zokuphucula iimveliso zethu kunye newebhusayithi yethu.
Ukwazisa abathengi bethu malunga nokukhutshwa okutsha kunye nokunikezelwa okhethekileyo.
Ukuvuma, ukuphanda, kunye nokukhusela ukusetyenziswa gwenxa kweemveliso zethu kunye newebhusayithi.
Isiseko sezomthetho sokuqhubekeka kweziphumo zakho zedatha ukusuka kwenye okanye uninzi lwezi zibakala zingezantsi:
Ubugcisa. I-6, Lit. 1a: imvume yakho oyinikiweyo yokulungiswa kwedatha yakho yobuqu ngenjongo enye okanye nangakumbi (umzekelo, ukuthumela incwadana yethu).
Ubugcisa. I-6, Lit. I-1b: imfuneko yokusebenza kwekhontrakthi phakathi kwakho nathi (umzekelo, ukuthenga).
Ubugcisa. I-6, Lit. I-1c: isidingo sokufezekisa uxanduva lwethu lwezomthetho / lwemali (umzekelo, isiphumo sokuthengwa).
Ubugcisa. 6, Lit. 1f: umdla wethu osemthethweni wokufezekisa iinjongo ezikhankanywe kwicandelo "Injongo" apha ngasentla.
Ngaphandle kwalonto, sirekhoda ulwazi lobuqu kuphela xa kungeniswa ngokuzithandela lundwendwe, umzekelo, kwivenkile yethu ekwi-Intanethi, nge-imeyile, okanye xa iindwendwe zizalisa ezinye iifom. Olu lwazi luya kusetyenziswa ngokukodwa kuthi ngeenjongo ezibonisiweyo.
Nceda ubone eli candelo lingasentla.
ukuqhubekekisa iiodolo zabathengi bethu kunye nemibuzo.
ukwazisa abathengi bethu malunga nokukhutshwa okutsha kunye nokunikezelwa okukhethekileyo.
ukwamkela, ukuphanda, kunye nokukhusela ukusetyenziswa gwenxa kweemveliso zethu kunye newebhusayithi.